Al-shabaab oo La Wareegtay Ceelwaaq Iyo Duqeymo Iyo Dagaal Ka Socda Degmadaasi – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Al-shabaab oo La Wareegtay Ceelwaaq Iyo Duqeymo Iyo Dagaal Ka Socda Degmadaasi
Warar goordhaw naga soo gaaray degmada ceel waaq ee gobalka gedo ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhaxeeyo ciidamada dowladda iyo kuwa militariga dalka kenya oo isku dhinac ah iyo xoogag katirsan Xarakada Al-shabaab oo weerar culus ku soo qaaday oo degmadaasi.
Dadka deegaanka oo ay la xiriirtay Idaacada Simba ayaa inoo sheegay Iney maqlayaan daryanka hubka nuucyadiisa kala duwan, sido kalana in ay jiraan duqeymo ay fulinayaan diyaarado dagaal oo aysan garan Karin dowladda laga leeyahay iyo goobaha ay duqeymaha ay labeegsanayaan diyaaradahaasi dagaalka.
Gudoomiye ku xegaanka amniga degmada ceelwaaq sahal macalin aadan oo la hadlay idaacada Simba ayaa inoo sheegay inuu jiro dagaalkaasi, aynan jirin ciidamo katirsan Al-shabaab oo gudaha u galay degmada , balse dagaalka uu ka socdo meel 6KM u jirta degmada oo ay isku fara saarayaan askarta kenya iyo kuwa maamulka degmada oo ay kaabayaan diyaarado dagaal iyo xarakada Al-shabaab.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaalkaasi ka socda degmada agagaaraheeda, wararka qaar ayaa sheegaya cutubyo katirsan Al-shabaab iney gudaha u galeen degmada ciidamada dowladdana ay u talabeen xadka somaaliya iyo kenya ay wadagaan, inkastoo wali aysan jirin cid si rasmi ah u xaqiijinkarta.
Wali wax war ah kama soo bixin taliska Xarakada Al-shabaab ee ku aadan weerarkaasi la sheegay iney ka danbeeyeen ciidamadooda kuwaa oo la wareegay gacan ku heynta degmada ceelwaaq ee gobalka gedo.
saraakiisha ciidamada hogaamineysa oo aan la xiriirnayna wey nooma aysan suura galin arinkaasi.
Waxii kusoo kordha duqeymahaasi iyo la wareegi taanka Al-shabaab ee degmada waaan idinla soo wadaagi doonaa marba marka ka danbeysa insh Allaaah………….. WWW.SimbaNews.com